Qoraa Tom Morris ayaa ka jawaabaya re: Haddii Harry Potter uu orday General Electric | Martech Zone
Qoraa Tom Morris ayaa ka jawaabaya re: Haddii Harry Potter uu orday General Electric
Khamiis, Agoosto 3, 2006 Isniintii, September 23, 2013 Douglas Karr
Ma aaminsani in maalin uun ay i dhaafto oo aanan si fudud ula yaabin saamaynta Internetka, Google, iyo Shabakadaha Bulshadu ku yeeshaan adduunkeenna. Taasi waxay u muuqan kartaa runtii 'geeky' laakiin waxaan ku soo laabtay gurigayga maanta waxaanan ku helay jawaab aad u naxariis badan oo ku saabsan qoraalkeyga Tom Morris ' buugga, Haddii Harry Potter uu orday General Electric. Taasi maalin uun bay iga dhigtay! Qoraalka oo buuxa iyo faallooyinka ka imanaya Tom ayaa ah halkan.
Tom wuxuu iga iibiyey buugiisa, si fudud isagoo kufiican inuu waqti qaato si aan u idhaahdo salaan oo aan wax uga sheego taariikhdiisa buugiisa. Immisa jeer ayaan aragnaa tan maanta? Waligey waligey jeebka kuma shubin boorsada Tom, laakiin markii uu ku arkay qoraalkayga shabaqa dhexdiisa, wuu fiicnaa inuu salaan dhaho. Waqti ka qaadashada jadwalkiisa si aan uga jawaabo qoraalkayga durba wuxuu ii sheegayaa in macluumaadka aan ku akhriyi doono buugga Tom ay fulin doonaan inaan sheego inta ugu yar.
Waxaa si layaab leh leh, waxaan ka soo laabtay guriga Verizon oo aan dhowr bil ka hor ka iibsaday taleefankayga. Waxaan taagnaa safka 55 daqiiqo (haa, taasi waa run), waxaan fuulay miiska, waxaana si deg deg ah la ii siiyay kaar ganacsi oo uu ku yaal lambar taleefan oo aan u baahnahay inaan waco oo ku saabsan taleefankeyga jabay. Lacag badan ayaan la qaatay raggaas, xitaa uma muuqan kuwo ku faraxsan inay i arkaan!
Xusuusin dhinac ah… Waxaan qoray Tom oo si kaftan ah ugu sheegay inaanan taageere u ahayn Harry Potter, laakiin wuxuu ii xaqiijiyaa inaanan ka walwalin. Wuxuu qoray:
Buugga waxaa loo qoray qaab ah in aan laga hor istaagin aqoonta ama faannimada ku saabsan Harry Potter. Waxaan ka maqlay ruqsad agaasimeyaal guud oo aan weligood akhriyin erey ka mid ah dheryasameeyaha oo qoro iyagoo ammaanaya buugga!
Waad ku mahadsantahay emaylkaaga sharafta leh! Waxaan rajaynayaa inaad ka hesho buugga cusub buug cusub oo ku cusboonaysiiya kuna dhiirrigeliya fikirkaaga dheeraad ah! Qaarkood waxay ii sheegeen in cutubka beenta uu kaligiis qiimihiisu yahay qiimaha buugga.
Mahadsanid, Tom! Hubso inaad i soo eegto markaad timaaddo Indianapolis. Qaxwada ayaa i dul taal!
Tags: dhererka harrytom morris
Wikiality, Runta, iyo Saxnimada